दलित महिलालाई स्तन ढाक्ने अधिकार सम्म थिएन
रानीपोखरीबाट लेउ निकालिँदै
कास्कीमा बालिकामाथि हिंसा बढ्यो
श्रीमान् खोजीदिन सरोकारवाला गुहार्दै सरीता
Law Matters !
कानुन पोष्ट संवाददाता Tuesday, April 2, 2019
हिन्दु सामन्तवादले सिर्जना गरेको वर्ण व्यवस्थाको जाँतोमूनि ३ हजार वर्षदेखि दक्षिण एसियामा करोडौं मानिस पिल्सिएका छन् । तीनै दलित भनिएका समुदायको महिलाहरु दक्षिण एसियामै ५० वर्षसम्म आफ्नो स्तन ढाक्नकालागि सङ्घर्ष गर्नु परेको कुरा सुन्दा जो कोहीलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर इतिहासमा यस्तै भयो ।
भारतको केरल स्थित त्रावणकोर इलाकाका दलित महिलाहरुलाई आफ्नो स्तन ढाक्ने अधिकार सम्म थिएन । परिस्थिति कतिसम्म थियो भने ब्राम्हण पुरुषको अघि दलित महिलाहरुले आफ्नो वक्ष खुला राख्नु पथ्र्यो । दलित महिलाहरुलाई आफ्नो अंग छोप्नेसम्म अधिकार थिएन । यदि दलित महिलाले कपडा लगाएमा उसलाई जस्तोपनि सजाय हुने व्यवस्था थियो । तल्लो जातकी महिलाले यदि सिधा शिर गरेर दरवार आई भने उसको स्तन काट्नेसम्मको आदेश दरवारबाट हुनसक्थ्यो ।
उक्त अधिकार पाउनका लागि त्यहाँका महिलाहरुले ५० वर्षसम्म घनिभूत सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो । उक्त अधिकार प्राप्तिका लागि त्यहाँका तल्लो भनिने नादर जातिका दलित महिलाहरु स्वयम्ले करिव आधा शताब्दी लामो संघर्ष गर्नु परेको थियो ।
यो सङ्घर्ष भारतको आजादीको संघर्षसँगपनि जोडिएको छ । त्यसबेला उक्त राज्यको शान्ति भङ्ग भएको थियो । समाजका अन्य पक्षलेसमेत महिलाले आफ्नो स्तन छोप्न नपाउने कुरुप चलनको विरोध गरेका थिए । विभिन्न दवावको बाबजुत उक्त इलाकाका राजाले २६ जुलाई १८५९ मा महिलाले आफ्नो स्तन छोप्न पाउँने अधिकार दिएका थिए । एजेन्सी
dalit women boobs
कानुन पोष्ट संवाददाता
मिलापत्रमै टुङ्गिन्छन् घरेलु हिंसाका घटना
आएन आवास अधिकारको नियमावली !
राहत पाइनन् दुई सन्तान गुमाएकी कमलाले
PREVIOUS POST Previous post: प्रहरीले बदनियत राखेर जथाभावी कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नपाँउने
NEXT POST Next post: अश्लील किताब तथा फिल्म बनाउनेलाई एक वर्ष कैद र दश हजार जरिबाना
कानून व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१
प्रदेश ऐन सङ्ग्रहको विमोचन
९३ वर्षमा नागरिकता
सम्भवत: कानुन पोष्ट नेपालकै पहिलो कानुनी पोर्टल हो ।
यहाँ हामीले नि:शुल्क परामर्शका साथै विभिन्न कानुनी जानकारी, कला साहित्य, रोचक प्रसङ्ग र कानुन व्यवसायीका अन्तर्वार्ता पस्किने प्रयास गरेका छौँ ।
यता पनि पढौँ है –
सर्वाधिकार कानुन पोष्टमा निहित © २०१९ |Kanun post